အပင်ထိပ်က ပန်းသီးလေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အပင်ထိပ်က ပန်းသီးလေးများ
Posted by အေမီ on Nov 16, 2011 in Drama, Essays.. | 51 comments
မိန်းကလေးတွေဟာ ပန်းသီးပင်ပေါ်က ပန်းသီးလေးတွေနဲ့ တူတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်………
အကောင်းဆုံး အလုံးတွေက အပင်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတတ်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေကတော့ အကောင်းဆုံးအလုံးဆီကိုရောက်ချင်စိတ်မရှိကြပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အပင်ထိပ်ကနေပြုတ်ကျမှာကို ကြောက်ကြလို့ပေါ့။ အဲဒိတော့ အပင်ခြေမှာကျနေကြတဲ့ အလုံးတွေကိုပဲကောက်သွားကြတယ်။ အဲဒိအလုံးတွေက ထိပ်ဆုံးကအသီးတွေလောက် မကောင်းကြပေမဲ့ လွယ်လွယ်ရနိုင်တယ်လေ။
ဒီတော့ ထိပ်ဆုံးကပန်းသီးလေးတွေက စဉ်းစားတယ်…….”အင်း..သူတို့တွေတော့ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီ”….လို့။
အမှန်တော့ သူတို့တွေဟာ တကယ်ကိုအဖိုးတန်လေးတွေပါ။ သူတို့တကယ်လုပ်ရမှာက သူတို့ရှိတဲ့အပင်ထိပ်ဖျားထိ သတ္တိရှိရှိတက်လာရဲတဲ့ သူရဲကောင်းကိုစောင့်နေဖို့ပါပဲ။
အေမီ နားလည်သလိုခံစား ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ မှားတာရှိရင် သည်းခံပါနော်။ ဒါကတော့ မူရင်းစာသားတွေပါ…………..
အေမီ အမရာ has written2post in this Website..
ဘာဘာ ဘာမှ မသိဘူး...........
View all posts by အေမီ →
အိုင်ဒီယာဆန်းဆန်းလေးတွေကို ပေးတတ်တဲ့ အေမီအမရာရဲ့ လက်ရာလေးကို အားပေးသွားပါတယ်နော်။
မမရေ….ဖတ်ရှုအားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ;D
ကျွန်တော်တော့ အပင်ပေါ်တက်ရင်းတက်ရင်း အတက်လွန်သွားလို့ ထင်တယ် အောက်ပြန်ပြုတ်ကျပြီး လူပျိုကြီးဘဲ ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အတွေးဆန်းဆန်းလေးတွေ တင်ပေးပါဦး။ အားပေးနေပါတယ်ဗျာ အန်တီအေမီ။ စာဖတ်ရင်း အန်တီအေမီကို အပင်ထိပ်က အပျိုကြီးစာရင်းဝင် ပန်းသီးကြီးထင်လို့ အန်တီလို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။ ခင်တတ်လို့ နောက်တာပါ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဗျာ။
အေမီက ထုမှ ကရေးပဲချိတေးတာကို။ အကျိုကြီး ဟုတ်တေးပါဘူး…………ဆယ့်ခြောက်နှစ် တစ်ရက်လျော့လေးပါ………
ဦးဦးအီးတီလည်း အမြန်ဆုံး ပန်းသီးတစ်လုံး အရယူနိုင်ပါစေ……(သစ်ပင်တက် ကျင့်ထားပါလားဟင်)
အင်း ….သည်ကလေးမတော့ မနူးမနပ်နဲ့ …ခက်တော့မယ်
ပင်လယ်ဟာ ကျယ်တယ်နက်တယ် သင်္ဘောသီးဟာလည်တယ်သွက်တယ်
ပင်လယ်မှာ လှိုင်းရှိသလို သင်္ဘောသီးမှာလည်း သမိုင်း ရှိတယ်ကွဲ့
သင်္ဘောသီးပြောင်းတွေ (လေသေနတ်) သမီးဘက်လှည့်လာပါ့မယ်. ..
စိုးတယ် …. စိုးမိတယ်… စိုးထိတ်မိတယ်…
ဒါဆို ဘွာတေး….ဘွာတေး……. အေမီ မကျောဘူးလို့ သဘောထားလိုက်ပါ အဟီး
အဲဒီကိုကို အင်ကြီး MG ထဲမှာဆိုးဆုံး။ သူ့ အကြောင်းသိချင်ရင် လူစွမ်းကောင်း ၁၁ ယောက်ထဲမှာကြည့်။ အေမီက ဆယ့်ခြောက်နှစ် တစ်ရက်လျော့လေးပါ ဆိုတော့ အပင်ထိပ်ကပန်းသီးလေးပေါ့နော်။ အောက်ကလူတွေလည်း မလွယ်ဘူး တုံးခု၊ တံချုနဲ့ လှမ်း၊ လှေကားထောင်တက်မယ်ဆိုဘဲ။ ကိုကို အီးတီနဲ့ ပင်လယ်ထဲဘဲ လိုက်ခဲ့တော့
ဘွားတေး.. ရဘူး.. ဘွားတေးရဘူး..
ဟိုမှာ ဂြိုလ်သား အီးတီက ပင်လယ်ထဲတောင်
ခေါ်နေပီ… အားလုံးထဲမှာ သူက အစွမ်းဆုံး
ဒါတောင် တောင်ကျွန်းက အဘဖောမလာသေးလို့…
တုတ်တိုကြီး ကိုင်ပြီး စောင့်နေလို့…
စိုးတယ်.. စိုးမိတယ်… စိုးရိမ်မိတယ်…
ဟယ် အေမီလေးက မီးမီးလေးပေါ့နော်
အရက်ဆိုလဲ အနံတောင်မခံနှိုင်လို့ နှာခေါင်းပိတ်သောက်ရတဲ့ လူရိုးလေးပါ ဟီဟိ
ဟို လူဂျိုးကြီးတွေ ပြောတာ နားမယောင်နဲ့ သိလား
သူ့ကိုယ်သူ နိုင်ဂံဒဂါ နဲ့ ဆက်ဆံတာ တတ်တယ်တဲ့နော်
ကီးသိပ်မြင့်တာနော် လွယ်ဝူး ကြောက်ချာရီး ..
မမှီတဲ့ပန်း တုံးခု လို့ လှမ်း တကျူနဲ့ လှမ်း.. ဆိုတာတွေ ရှိသေးတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းများကြောင့်လည်း ထိပ်ဆုံးက အသီး ရအောင် ယူနိုင်တဲ့ သူကတော့ ယူနိုင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မစွပ်ခင်က ညွှတ်ချင်……………….စတဲ့ စကားတွေရှိသေးတာပဲ။ တနည်းနည်းတော့ ရအောင်ယူဖို့ကြိုးစာကြသလို၊ ရစေချင်သူတွေကလည်း ကြံဖန်ပြီး ရအောင်နေမှာပေါ့ အဟဲ……..
အင်း.. အေမီလေး စာဖတ်မိတော့မှ… ကိုရင်တစ်ယောက်
အိုင်းစတိုင်းလို ပန်းသီးကြွေတာ ကြည့်ပြီး ကိုရင်နှလုံသားက
နိယာမတွေ ဖော်ထုတ်မယ့် စိတ်ကူးပျက်သွားပါပီကွယ်… ဒီတော့
ယနေ့ကစပြီး… အပင်ထိပ်ဆုံးက ပန်းသီးလေးကို…
ကိုရင်က တုံးခု၊ တံချု၊ လှေကားထောင်တက် မရရတဲ့
နည်းတွေနဲ့ ကြံယူလိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပီ…
အပင်ပေါ်တက်ရင်းနဲ့ ထိပ်ဖျားမရောက်ခင် အောက်ကအသီးတွေကိုတော့
ကိုရင် မစားဘူးလို့ မီလေးသိအောင် ပြောပါရစေ..
အပေါ်ရောက်ကာနီးရင် လေးဂွနဲ့ ..ဆော်ပစ်မယ်
အောက်ကအသီးတွေ တလုံးပီးတလုံး စားပီးမှ အမောဖြေပီး အေးဆေးတက်ပါလားကိုရင်…
ကပေ့မှာ ရောင်းဇရာ ချိဒလယ်တဲ့ …၂လုံးတောင်မှ …
ဟယ်… ကပေ့မှာ ပန်းဒီး နှစ်လုံးရှိရင်တော့..
ဘောလောင်းပြီး နိုင်တဲ့လူ ယူကြေး…
ညတုန်းက ကပေ့ ဘောပွဲနိုင်တယ်ကြားတယ်..
ဒီလူ ဘယ်ချောင်မှာ ပန်းသီးသွားခိုးစားနေလဲမသိဘူး…
ကိုယ့်အသီး.ကိုယ်ဖြုတ်စားကြပါရား..(ခြံထဲက ဇီးသီး..တို့ ဘာတို့ )
ရွက်ပုံးသီးလေးများ မချားချင်ဘုရားဗျ …
ဘာတဲ့ အရိုးပေါ် အရွက်ဖုန်းဆိုရား ဘာ၇ှိုလား …
ရွက်ပုံးသီးဆိုရင်တော့ အပင်ပေါ်တောင် တက်ဆရာ မလိုဘူးနော်…
ဘာတဲ့ မော်ဒယ်ရှိုလား ဘာရှိုလား ဟီဟီဟိ…
ဖြိုးဖြိုးလေးရေ လာပါတော့ ဂီဂီတမော့မော့
ရွက်ပုန်းသီးတော့ မစားပါရစေနဲ့ ဆြာမှော်ရယ်…
ဂီဂီ သိသလောက်တော့ ရွက်ပုန်းသီးနဲ့ သင်္ဘောသီးနဲ့တည့်တယ်တဲ့
တားတားတို့က ရွက်ပုန်းသီးတွေ ချားဝူး..
နာနတ်သီးလောက်မှ စားတာ.. ဟိဟိ
တကယ်တော့ မမေ့နှိုင် သူကြီးက ဆြာ မှော် ကိုးးးးးးးးး
လေသေနတ်ကတော့ အချိန်တိုင်းပစ်နေတာပဲ မိုးဇိရဲ့
ဘာ.. ဘာ.. ကိုအင်ကြီးက ကိုယ့် မိုးဇွလေးကို..
လေသနတ်နဲ့ ပစ်မို့.. လုပ်ဒယ်…
မကြောက်နဲ့.. မိုးဇွလေး… အဟင်း..
ဒီလူကြီး ပစ်ရင် ကိုရင် အရှေ့က ကာပေးထားမယ်…
ကိုရင့် အစိလေး ထိသွားရင်တော့… (လည်စိပြောတာ.. လည်စိ)
စေဒနာတွေ ဗလပွ ပါလား ကိုရင်စည်
ဘယ်တုန်းကတည်းက မိုးဇိ ကို ခိုးကြည့်ပီး
အကျိုး ရှိအောင် ပိုးမိနေတာလဲဟင် …
မိုးဇက်ပြော သလို ထိပ်ဆုံးတွေက လေ သေနတ် (လေသမား) စာ မိကုန်တာ များပါတယ်။ :grin:
ဟေ့လူ ရှူးတိုးတိုး …..
ထိပ်ဆုံး က ပန်းသီး ချဉ် တယ်များ ပြောနေကြမလားလို့……
အသီးတွေက အမျိုးမျိုးရှိသလို………ခူးသူကလည်း အမျိုးမျိုးဆိုတော့……… ချိုတယ်ထင်တဲ့လူရှိသလို………ချဉ်တယ်ထင်တဲ့သူလည်း ရှိနိုင်တာပါပဲ။
(မှတ်ချက်ဆိုတာ မှတ်ချက်ပေးသူရဲ့ သဘောထားနဲ့ မှတ်ချက်ပေးခံရတဲ့ အကြောင်းအရာ တဝက်စီပါတယ်လို့ အေမီ ထင်တယ်။ :D)
တိန်…. အဲ့ဂလိုကြီး ထင်တွားတာလား ..
အဟီး မတိရို့နော် တားတားက ပျော်တတ်လို့စဒါနော်…
လေသိုင်းဆြာရီး ဟုတ်ဝူးနော် တိရား …
ရွာထဲက ပျော်တတ်တဲ့ ပေါက် ပေ လူး ဂီ ကိုရင်စည် အဖွဲ့ထဲမှာ
ဂီဂီလေးက လိမ္မာဆုံး အရိုးဆုံးလေး…
ဟာ…………….ခုမှ ဖတ်မိတယ်။ အေမီ ဘယ်လိုမှ မထင်ပါဘူး ကိုဂီရ။ ခင်ရာမင်ကြောင်း စတာနောက်တာ အေမီ နားလည်ပါတယ်။ ခုက ကြုံတုန်း မှတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အေမီ့အမြင်လေးကို ပြောပြတာပါ။
အသီးတွေက စားသုံးသူ အကြိုက်ပါ… ချိုတာကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်
ချဉ်တာကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်… ရတဲ့အသီးလေးကို စိတ်ကျေနပ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။
ကိုရင်ကတော့ ပန်းမီလေး… အဲ့.. ပန်းသီးလေး စစ်စစ်တလုံးရရင် ပဲ ကျေနပ်ပါပီ..
ဒါနဲ့ ဟိုလူ အရှေ့ကျွန်း ကအင်ကြီး ပြောတာ မီလေး သွားမယုံနဲ့…
သင်္ဘောသီးတွေက ချိုလဲချိုတယ်.. စားလိုက်ရင်လည်း ရင်ထဲအေးသွားတာပဲရှိတယ်..
ပန်းသီးလေးတွေ အတွက်ဆို သင်္ဘောသီးတွေက အမြဲ အဆင်သင့်ပါနော်…
အဲ့ အင်ကြီးကို မယုံနဲ့… စိုးတယ်.. စိုးမိတယ်… စိုးရိမ်မိတယ်…
၀မ်းပျက်ဝမ်းလျောဖြစ်နိုင်တဲ့ ယင်နားစာ သင်္ဘောသီး ကို
စားရင် မှားမှာပေါ့ကွယ် ….
ဂီဂီတို့လို နီတာရဲ လမ်ပူတန်(ကြက်မောက်သီး) လေးပဲကောင်းပါတယ်
တူကလေးက အဲ့ရို ဂီ့ကို နားလည်မယ် ဆိုတာ ဂီ တိနေပီးတားပါ
အဲ့ရာ ဟို ကြားဆိပ်ကမ်းဆိုက်ချင်သူဒွေ သာ ဂီဂီ့ကို နားမလည်ကြတာ..
သင်္ဘောသီးတွေ တွေ့လယ် မလား ဟွန့်. ..
အမငီး.. ကအင်ကြီးက လန်ပူတာ ကြက်မောက်သီးတဲ့… ဟီးး
တွေးကြည့်တာနဲ့တော့ ကြက်သီးထမိတယ်… (အမွှေးတွေနဲ့ အခွံမှာတောင်)
အရွေးမမှားနဲ့ အီးတီနဲ့ တားတားလို့ ဖလန်းဖလန်းဖြစ်နေတဲ့..
သင်္ဘောသီးတွေကို အရွေးမှန်ရင် ဈေးမှန်မှန်နဲ့ရမယ်.. (ဒီကအဆင်လေးတွေ)
မီလေး.. သိ.. သိစေ… သိစေဖို့… ညှဲညှဲ..
မနက်က comment ရေးတုန်းက ၂ခုထဲရှိသေးတယ်။ သွက်လိုက်တဲ့ သူတွေ။ မီလွယ်ဘူး။ ကြက်မောက်သီးက မကောင်းဘူး။ သေးသေးလေး။ သင်္ဘောသီးကြီးဘဲကောင်းတယ်။ ကိုရင်စည်သူ ပြောသလို သင်္ဘောသီးတွေက ချိုလဲချိုတယ်.. စားလိုက်ရင်လည်း ရင်ထဲအေးသွားတယ်။ ကြီးလည်းအကြီးကြီး။ အသီးကို ပြောတာ။ မီးလေး လူရွေးမမှားနဲ့ ။ စိတ်ပူတယ်။
တကယ်တော့ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမဆိုတာ
ခူးတဲ့လူနဲ့ နီးစပ်မှ ဖြစ်တာမျိုးပါ။
နီးစပ်မှုရှိရင် သူ့ကားကို မောင်းပေးနေတဲ့ ဒရိုင်ဘာချောချောလေးနဲ့လည်း
ညားနိုင်တာပါပဲ။ အိန္ဒိယ မှာ သွားနေရင် ကုလားနဲညားမှာပါပဲ။
စပိန်မှာသွားနေရင် စပိန်လူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့ ညားကြတယ်ဆိုတာ
နီးစပ်မှုပါ။ ကဗျာထဲမှာတော့ လှကြတာပေါ့ဗျာ။
လက်တွေ့မှာတော့ နီးစပ်ရင် အမြင့်ကြီးက အသီးတစ်လုံးကလည်း
ကျွန်တော်ပြောတာ လက်တွေ့သိတ်ဆန်နေရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။
ခူးသူနဲ့ ပန်းသီး သပ်သပ်စီ ဝေးနေရင် ပန်းသီးရှိတာလည်း ခူးချင်သူ မသိနိုင်သလို၊ တကယ်လို့ ပန်းသီးကြွေကျနေခဲ့ရင်တောင် ခူးသူကလည်း ဘယ်မြင်နိုင်မလဲ။
တူကလေးရယ် တိုက်ဆိုင်ထှာ …
ကိုဂီ့လည်း ပန်းသီးပို့စ် လှလှလေးရေးထားတာ
မအားသေးလို့ ပုံလေးတွေ ထည့်ရသေးလို့ draft ထားထားရတာ…
ဂေဇက်စောင့်ကြီး လုပ်မှပဲ သင်္ဘောသီးတွေ မှော်ဆြာတွေ
ဒလိုင်ဘာ လုပ်ချင်စိတ် နွားကျောင်းချင်စိတ် ပေါက်တော့မယ်ထင်တယ်
အပင် ကိုင်လှုပ်တာနဲ့ တစ်လုံးထက်မက ကြွေလာတာကိုကောက်စားမယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကလည်းရှိသေးတယ် … ။ အညှာမခိုင်တဲ့ အသီးတွေသာ ကြွေတာပါ … .အညှာကောင်းနေသရွှေ့တော့ အပင်ပေါ်မြဲနေဦးမှာပဲ …. အဲ့ဒီအသီးတွေကတော့ … အညှာလည်းကြွေ အသီးလည်းခြောက်ပေါ့
ဖြိုးကြီးဆိုထားတဲ့ ဟိုသီချင်းကိုတော့ သောက်ညင်အကပ်ဆုံးပဲ … ဘာတဲ့ …
ပန်းမခူးရဘူးဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်လေး ကပ်ထားရုံနဲ့ လုံခြုံမလား ။
မချွေသော်လည်းပဲ ကြွေမှ .. ဘာညာနဲ့… နားထောင်မိရင် နားရင် ထအုပ်ချင်တယ်
မအိတုံ.. အဲဒါ ဖြိုးကြီး မဟုတ်ဘူး ရိန်မိုး.. ဆိုတဲ့ သူက
ဒါပေမဲ့ပန်း(သီး)ဆိုတာ…၊နေနိုင်တုန်းခဏပါကွာ ..သဘာဝရဲ့အောက်မှာ…. တနေ့တော့ကြွေမှာပဲ…..
ကြွေသော အသီး လည်း မွှေးတတ်ပါသည်…။
ရွာထဲ က ရွာသားတွေလည်း ပန်းသီးတွေ အစားများ ပြီး ချကား အဲ စကား မပီးကြတော့ဘူနဲတူတယ်….
အေမီ အမရာ ရေ
ကြွားတယ်လို့ တော့ မထင်ပါနဲ့ 
ကျုပ် မောင်ပေ သည်
အပင်ထိပ်မှ ပန်းသီး ၊ ရိုးရိုးအသီးမဟုတ် ၊ အရွက်များဖြင့် ပျောက်နေသော
တစ်ကယ့် ပန်းသီးကို ရရှိပြီးသကာလ
တစ်သက်လုံး တန်ဖိုးထား မြတ်မြတ်နိုးနိုးဖြင့် ပျော်ရွှင်လျှက် ရှိပါကြောင်း
( ဟီဟိ…ကိုယ်ကြွားတယ်လို့ ပြောချင်ပြောပါ )
ဟုတ်ပါပြီ….ရွက်ပုံးသီးလေးပိုက်ပြီး တသက်လုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ မုဒိတာပွားပါတယ်နော် ^_^
နှမတော်က အပင်ထိပ်က ဘယ်အလုံးလဲကွဲ့ ..
အပေါ်က ရွာစားတွေက စားနေကြ လူကြီတွေပါ…ပန်းသီးကုန်သည်တွေကွဲ့ ..
အထင် မစမောလ် လိုက်နဲ့ ..ဆယ်ပါးမှောက်သွားမယ်..
အေမီ လည်းအပင်ပေါ်က ပန်းသီးတစ်လုံးပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အထင်မသေးသလို့၊ ငါက အမြဲထိပ်ကလို့လည်း ကြွေးကြော်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခူးသူမြင်စေဖို့ အရိပ်ယောက်ပြ လက်ရခေါ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ခုန်ချရန်လူရှာနေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။
ဒီစာပုဒ်က အပင်ထိပ်မှာစောင့်နေတဲ့ ပန်းသီးလေးတွေကို ရည်ရွယ်ရေးလိုက်တာပါ။
” ကောင်မလေးအေ မျိုးရိုးလဲကောင်း ပညာလဲတတ် ရုပ်ချောသဘောကောင်းရဲ့သားနဲ့
ဘာလို့များအပျိုကြီးဖြစ်နေပါလ်ိမ့်တော်” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအဖြေကို ဒီပန်းသီးပင်ကိုကြည့်ပြီးရလိုက်ပါသဗျာ။
ဒါပေမယ့် အမြင့်ဆုံးကို မမှီလောက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အပင်ပေါ်ကိုတက်မလာတော့
ခူးမယ့် သူလက်ထဲမရောက်တော့ ဘူး။